महिलाले आरक्षण होइन, समानता खोजेका हुन् :: Tarun Khabar: Digital Online Paper from Nepal
महिलाले आरक्षण होइन, समानता खोजेका हुन्
विजया कोइराला, सचिव, बालकोट बचत तथा सहकारी संस्था लि.
सहकारीमार्फत् समाज परिवर्तनको अभियानमा लागेकी विजया कोइराला आसन्न निर्वाचनमा नेपाली कांगे्रसको तर्फबाट समानुपातिक उम्मेदवारमा एकाइ र क्षेत्रबाट सिफारिस भएकी छन् । समाजसेवामा रुचि राख्ने विजयाले सहकारी अभियान, राजनीति र घरपरिवारलाई एकै साथ अघि बढाएकी छन् । परिवारको सहयोगमा परिवर्तनका लागि सहकारी र आस्थाको राजनीति गर्न समयको पाबन्दीसँग उनी सम्झौता गर्दिनन् । यिनै परिवेशमा विजयासँग कालिका महतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
० सहकारीमा धेरै महिला इन्गेज छन् होइन ?
– समूह बनाएर छरिएर रहेको पूँजी संकलन गरेर केही गर्छाैं भन्नेलाई सहकारीले अवसर दिएको छ । महिला अथवा जोसुकैलाई सहकारीले आत्मनिर्भर बनाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
० समूहमा कति सदस्य छन् ?
– ३३ सयभन्दा बढी सदस्य छन् । ३० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्छौ ।
० पूँजी कहाँ लगानी हुन्छ ?
– व्यवसाय गर्छु भन्नेलाई हामी ऋण दिन्छौं, घरायसी कामकाजका लागि, विदेश पढ्न जानेहरूका लागि पनि हामी ऋण दिन्छौं । पछिल्लो समयमा हामीले सार्वजनिक यातायातमा लगानी गरेका छौं । बिना झन्झट हामी एकै दिनमा ऋण प्रवाह गर्छौ । विशेषतः हामी सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पुगोस् भन्ने हिसाबले काम गर्छाैं । जस्तो आफूले गर्न चाहेको व्यवसायमा तालिम दिन्छौं, त्यसपछि ऋण प्रवाह गर्छाैं ।
० कुन व्यवसाय गर्न बढी आकर्षित भएको पाइयो ?
– कम्युटर मर्मत, व्युटिपार्लर, सिलाइबुनाइ र व्यापार व्यवसायमा आकर्षण देखियो । पछिल्लो समयमा सार्वजनिक यातायात फस्टाएको व्यवसाय हो ।
० ब्याजबाटै यति धेरै पूँजी संकलन भयो ?
– हामी ब्याज लिने मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्व पनि त्यत्तिकै पूरा गछौंै । ५५ वर्ष नाघेका जेष्ठ सदस्यलाई १ प्रतिशत ब्याज, दशैं खर्च उपलब्ध गराउँछौं । आँखा, मुटु, मृगौला र दाँतको स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्छौं । रक्तदानको कार्यक्रम आयोजना गछौं ।
० कतिले तालिम पाएर स्वरोजगार बने तथ्यांक छ ?
– हामीले कार्यालयमा व्यवस्थित ढंगले तथ्यांक राखेका छौं । विशेष गरी कम्युटर, ब्युटिपार्लर सञ्चालन र सिलाइ कटाइ सञ्चालन गर्ने धेरै छन् । ड्राइभिङ तालिममा खासै आकर्षण देखिएन ।
० ऋण लिएर तरक्की गर्नेहरू कति छन् ?
– धेरै छन्, एकजना बहिनीले सबैभन्दा राम्रो सिलाइबुनाइमा गरेकी छन् । कलंकीबाट बालकोट कुद्ने १५ वटा फोर्स गाडीमा हाम्रै संस्थाबाट ऋण प्रवाह भएर सञ्चालन भएको छ ।
० भविष्यमा के गर्ने योजना ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
– सदस्यलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना ल्याउँदैछौं, जो घरबाट बाहिर निस्कन पाउनु हुन्न उहाँहरूलाई घरमै बसेर आयआर्जनको माध्यम देखाइदिन्छौं । विशेष गरी महिला र केही गरौं भन्ने आत्मविश्वास भएका व्यक्तिहरूलाई तालिम दिएर आयआर्जनको बाटो देखाउँछौं ।
– हामीले सहकारी स्थापना गर्दा यस क्षेत्रमा पनि यस्ता संस्था धेरै थिए । कसरी सञ्चालन गर्ने आइडिया पनि थिएन । यद्यपि काम गर्दै गएपछि यसैमा चासो बढ्यो ।
० कमाई पनि राम्रै हुँदो रहेछ ?
– म आफ्नो कमाई भन्दा पनि समाजलाई समृद्धि बनाउनुपर्छ भन्ने सोच राख्ने मान्छे हुँ । त्यसैले विभिन्न सामाजिक संस्थामा रहेर बिहान ४ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म सक्रिय छु । व्यक्ति होइन, समाज र राष्ट्र समृद्धि बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो छ । त्यसैले व्यक्तिगत कमाईले मेरो जीवनमा खासै अर्थ राख्दैन ।
० कुन–कुन सामाजिक संघ–संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ ?
– रेडक्रसको महिला संयोजक हुँ, त्यसबाहेक लैंगिक समानता, पतञ्जलि योग, टोलसुधार तथा विपद व्यवस्थापनलगायतका दर्जनौं संघ–संस्थामा आबद्ध छु । संस्थामा रहेर वा नरहे पनि हरेक सामाजिक काममा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने मेरो इच्छा हो ।
० सबै संघ–संस्थामा काम गर्न समय पुग्छ ?
– तपाईंजस्तै धेरैले मलाई यही प्रश्न गर्छन्, उहाँहरूलाई जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भन्ने उत्तर दिन्छु । तर, राम्रो काम गर्ने इच्छा भयो भने समयले पनि साथ दिँदो रहेछ भन्ने लाग्छ । अहिलेसम्म घरपरिवार र सामाजिक संघ–संस्थाका लागि समय दिइरहेकै छु ।
– हो, म नेपाली कांगे्रसको इमान्दार सिपाही हुँ, क्षेत्रीय प्रतिनिधि छु, आसन्न निर्वाचनमा नेपाली कांगे्रसबाट भक्तपुर जिल्ला क्षेत्र नं. २ (क) बाट समानुपाति उम्मेदवारमा एकाइ र क्षेत्रबाट सिफारिस भएकी छु ।
० आरक्षणबाटै महिलालाई नेतृत्वमा पु¥याउनुपर्ने रहेछ ?
– होइन, महिलाले आरक्षण होइनन्, समानता खोजेका हुन् । वर्षौदेखिको हाम्रो पितृसत्तात्मक समाजमा महिलालाई अवसर दिएर समान सहभागिताको हिस्सादार बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
० प्रतिस्पर्धाबाट राजनीतिमा आउन महिलालाई कठिन छ ?
– हाम्रो समाज महिलालाई फस्ट पर्सन बनाउन चाहँदैन । हरेक क्षेत्रको निर्णायक तहमा महिलालाई अवसर दिन हाम्रो समाज चाहँदैन । तर समाज विस्तारै परिवर्तन भइरहेको छ ।
० राजनीति र समाजसेवामा लाग्न परिवारले छुट दिएको छ ?
– परिवारको सहयोगले नै म यो स्थानमा आइपुगेकी हुँ । श्रीमान् कलेजमा अध्यापन गराउनु हुन्छ । दुई सन्तान छन् । घरको व्यवस्थापन हामी दुवै मिलेर गर्छाैं ।
Tarun Khabar0response सोमबार,३० आश्विन २०७४ 1154 Views
पेसामा महिलालाई स्थापित हुनै कठिन
मंगलबार,१ फाल्गुन २०७४
बिहिबार,२५ माघ २०७४
बिहिबार,१८ माघ २०७४
सन्तान रुवाउँदै सडक आन्दोलनमा छौं
बिहिबार,११ माघ २०७४